Goolhaye.com | Archive | Soomaalia
Mo Faarax oo wacdaro kadhigay tartanka orodada aduunka oo lagu qabtay Rushka
Home » Archives by category » Soomaalia
Posted on August 16, 2013'); ?> by goolhaye and saved under africa, Maxaa Cusub, Soomaalia
Maxamed farax oo ku magac dheer Mo Farah ayaa ku guuleystay orodada aduunka ee 5000-mitir kasoo noqday orodaagii labaad ee isku qaada dahabka olimbikada iyo kan aduunka. 30-jirkan ayaa ku raayay wakhti ah 13-daqiiqadood iyo 26.99-sekeno waxaana ku xigsaday Hagos Gebrhiwet oo ka socda Ethiopia kasoo ka horeeyey Kenyanka Isiah…
Zimbabwe oo saboolnimo uga hareysa is reeb reebka koobka aduunka ee 2014
Posted on January 2, 2013'); ?> by goolhaye and saved under africa, Koobka Aduunka, Soomaalia
Zimbabwe ayaa laga yaaba in ay awoodi wayso ka qeyb galka kulamad is reeb reeb koobka aduunk ee 2014 loogu soo baxaayo kadib markii dhaqaalo daro ay soo food saartay xiiirka kubada cagata ee dalkaas ku waasoo an awoodin qarshadka ku baxayo kulamadaasi . Madaxweynaha xiriirka Zimbabwe ee marka magaciis…
War Culus:Orodyahanka Mo Farah oo loo xiray tuhun argagixisnimo(SAWIRO)
Posted on December 30, 2012'); ?> by goolhaye and saved under England, Maxaa Cusub, Soomaalia
Orodyahanka haysta horyaalka orodka 10-ka kun iyo shanta kun ee dunida ee asalkiisu ka soo jeedo Soomaaliya, hase yeeshee haysta dhalashada Britain ugana qayb gala tartamada magaca British-ka Mo Farah, ayaa loo qabtey tuhun waxaa loogu yeero argagixisada, xili uu doonayey in uu galo wadanka Mareykanka. Wargeyska The Sun ee…
Posted on December 30, 2012'); ?> by goolhaye and saved under africa, Maxaa Cusub, Soomaalia
Iyadoo xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta uu culeys ku saarayo ciidamada nabad ilaalinta AMISOM in ay ka guuraan garoonka kubada cagta Stadium Muqdisho ayaa xoghayaha guud ee xiriirka Soomaaliyeed Cabdi Qani Saciid Carab, Cali Cabdi Maxamed (Shiine) oo xubin ka ah guddiga fulinta xiriirka iyo Lex Vander oo ah kabiirka…
Tartan hal maalin ah oo lagu qabtay Minneapolis
Posted on December 28, 2012'); ?> by goolhaye and saved under africa, Maxaa Cusub, Soomaalia
Waxaa maalintii Talaada ahayd lagu qabtay garoonka TC indoors Sports Arena ee gobalkaan Minnesota Jiirooni hal maalin soconayay, iyadoo jiiroonigaan u ku soo beegmay maalinta fasax ah ee dicember 25keeda. Waxaa tartanka ku loolamayay 6 kooxood oo kala ah TC Stars, Tigers, Halgan, Faynuus, Eden Prairie, iyo Kalsooni. Koobkaan hal…
DAAWO SAWIRADA: Garoonka Stadio Muqdisho oo la dhigay rooga cowska ah
Posted on December 19, 2012'); ?> by goolhaye and saved under africa, Maxaa Cusub, Soomaalia
Soomaaliya oo guul daro weyn dhabarka loo saaray “Akhri Warbixinta ciyaartii galabta”
Posted on December 1, 2012'); ?> by goolhaye and saved under Maxaa Cusub, Soomaalia
Xulka Qaranka Soomaaliya ayaa galabta Guul daro aad u xun kala kulantay Xulka Qaranka Dalka Tanzaaniya ay galabta kuwada ciyaareen Magaalada Kampala kulan katirsan Tartanka Bariga iyo Bartmaha Afrika . Ciyaarta galabta waxa ay Soomaaliya u aheed ciyaar aad u xun aadna looga niyad jabo kadib markii Goolka Soomaaliya uu…
Qaranka Sudan oo si dirqi ah kaga badiyay qaranka Soomaaliya “Natiijada ciyaarta”
Posted on November 28, 2012'); ?> by goolhaye and saved under Maxaa Cusub, Soomaalia
Xulka dalkeena Soomaaliya ayaa guuldaro kasoo hooyay kulankii labaad ee ay ciyaaraan waxaana ka badiyay Xulka Sudan. Waqti dambe ee Ciyaarta ayaa Soomaaliya waxaaa lag dhaliyay Goolka guusha. Natiitajada Ciyaarta ee Sudan1-0 ay ugu badisay Soomaaliya ayaa ka dhigaysa in soomaaliya ay rajo beesho. Guruubka B hada Sadax dal…
Maxaa Galabta kala haysta qaramada Soomaaliya iyo Sudan
Xulka qaranka Soomaaliya ayaa galabta ciyaar adag la yeelan doona dalka Sudan, ciyaartaasna waxaa ay qeyb ka tahay ciyaaraha bariga Afrika. Ciyaaryahanadda Soomaalya ayaa isku diyaarinaya kulankoodii labaad, iyagoo horey guul daro 5-1 ah kala soo kulmay qaranka dalka Burundi. Soomaali kusugan magaalada Kampala ayaa sheegay in ay niyada udhisi…